Mogadishu Journal » Abuu Mansuur oo isku sii dhiibay maamulka Koonfur galbeed
Mjournal :-Wadaadka lagu magacaabo Sheekh Muqtaar Cali Roobow (Abuu Mansuur) ayaa isku soo dhiibay Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida uu Risaala u xaqiijiyay Taliyha Ciidanka Booliska gaarka ah ee maamulkaas Shiine Macalin Nuurow.
Taliyaha ayaa sheegay in Abuu Mansuur keligiisa uu isku soo dhiibay maamulka Koonfur Galbeed, Maleeshiyaadkii uu watayna ay ku sugan yihiin duleedka Abal.
“Wuu isa soo dhiibay Roobow Xudur, ayaana hadda joognaa si nabad ah ayuuna ku joogaa wadaadka.” Ayuu yiri Shiine Macalin Nuurow Afhayeenka Maamulka Koonfur Galbeed.
Dhanka kale Afhayeenka Madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Nuuradiin ayaa Risaala u sheegay qorshaha Koonfur Galbeed in uu yahay sidii si nabad gelyo ah loogu soo dhaweyn lahaa wadaadka.
“Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo sanadihii dambe ku sugnaa degaanka Abal, ayaa saaka go’aansaday inuu saaka isku soo dhiibo Maamulka Koonfur Galbeed ee garabka Militari ka helaayo ciidanka Dowladda, Abal ayuu iska soo dhiibay ciidanka dowladda ayuu hadda la socdaa.” Ayuu yiri Afhayeenka.